သင်္ကြန်ရေကစားလို့ ဖခင်က သမီးကို ရိုက်မိရာ သမီးသေဆုံး - Real Gaming Myanmar
သင်္ကြန်ရေကစားလို့ ဖခင်က သမီးကို ရိုက်မိရာ သမီးသေဆုံး
By thant naing /2months ago / Local News / No Comments
ဖခင်မှ သမီးဖြစ်သူအား သင်္ကြန်ရေကစား၍ ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ သမီးဖြစ်သူ သေဆုံးသွားခဲ့မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည် …. ။
ယမန်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့က အုတ်တွင်းမြို့ နယ် သရက်ချဉ် ကျေးရွာမှ မအေးအေးခိုင် အသက်(15)နှစ်အား ဖခင်ဖြစ်သူမှ သင်္ကြန်ရေကစားခြင်းကြောင့် ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ နောက်စေ့အား ရိုက်မိသဖြင့်သတိလစ်မေ့မျော သွားခဲ့၍ အုတ်တွင်းဆေးရုံ မှ တောင်ငူဆေးရုံကြီးသို့ ရင်ခုန်သံ ရှင်/ကူ ယာဉ်ဖြင့် အရေးပေါ် ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း သမီးဖြစ်သူမှာ သေဆုံးသွားခဲ့သဖြင့် အအေးခန်းအခေါင်း ဆင်ပေးထားခဲ့ပြီးသော်လည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ညသန်းခေါင်ကျော်က အအေးခန်းအခေါင်း ဆင်ပေးထားသော မအိအိခိုင် အသက်(15)နှစ်၏ နာရေးဖြစ်စဉ်မှာ ဖခင်မှ သင်္ကြန်ရေကစားခြင်းကို ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ သေဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလောင်းအား အုတ်တွင်းဆေးရုံရင်ခွဲရုံသို့ ရင်ခုန်သံ ရှင်/ကူ အသင်းမှ အခမဲ့ ထပ်မံပို့ဆောင်ကူညီပေးထားကြောင်း သိရပါသည်။
မိဘများသတိပြုစရာပါ။ ဒီကာလဟာ သူသူကိုယ်ကိုယ် အနည်းနဲ့အများ ပျော်ရွှင်နေကြချိန်မို့ “ငါ မိဘပဲ” ဆိုသည့် ဖိအားမျိုး မပေးသင့်ပါ။သင့်တော်ရုံမျှသာ ဆိုဆုံးမသင့်ပါကြောင်း ခုတော့ မိသားစုတစုလုံး ဖြေမဆည်နိုင် ရင်ကွဲစရာ အဖြစ်မျိုး ကြုံကြရရှာလေပြီး …
သတင်းဓါတ်ပုံ – အရှင်တေဇ(နာယကဆရာတော်) – ရင်ခုန်သံ ရှင်ရေးကူညီမှုအသင်း – ဈေးကျောင်းတိုက်၊အုတ်တွင်းမြို့ 
ဖခငျမှ သမီးဖွဈသူအား သင်ျကွနျရကေစား၍ ရိုကျနှကျဆုံးမရာမှ သမီးဖွဈသူ သဆေုံးသှားခဲ့မှု ဖွဈပှား ခဲ့သညျ …. ။
ယမနျနေ့ သင်ျကွနျအကနြကေ့ အုတျတှငျးမွို့ နယျ သရကျခဉျြ ကြေးရှာမှ မအေးအေးခိုငျ အသကျ(15)နှဈအား ဖခငျဖွဈသူမှ သင်ျကွနျရကေစားခွငျးကွောငျ့ ရိုကျနှကျဆုံးမရာမှ နောကျစအေ့ား ရိုကျမိသဖွငျ့သတိလဈမမြေ့ော သှားခဲ့၍ အုတျတှငျးဆေးရုံ မှ တောငျငူဆေးရုံကွီးသို့ ရငျခုနျသံ ရှငျ/ကူ ယာဉျဖွငျ့ အရေးပျေါ ကူညီပို့ဆောငျပေးခဲ့သျောလညျး သမီးဖွဈသူမှာ သဆေုံးသှားခဲ့သဖွငျ့ အအေးခနျးအခေါငျး ဆငျပေးထားခဲ့ပွီးသျောလညျးလုပျထုံးလုပျနညျးအရ ညသနျးခေါငျကြျောက အအေးခနျးအခေါငျး ဆငျပေးထားသော မအိအိခိုငျ အသကျ(15)နှဈ၏ နာရေးဖွဈစဉျမှာ ဖခငျမှ သင်ျကွနျရကေစားခွငျးကို ရိုကျနှကျဆုံးမရာမှ သဆေုံးခဲ့ရတာ ဖွဈခွငျးကွောငျ့အလောငျးအား အုတျတှငျးဆေးရုံရငျခှဲရုံသို့ ရငျခုနျသံ ရှငျ/ကူ အသငျးမှ အခမဲ့ ထပျမံပို့ဆောငျကူညီပေးထားကွောငျး သိရပါသညျ။
မိဘမြားသတိပွုစရာပါ။ ဒီကာလဟာ သူသူကိုယျကိုယျ အနညျးနဲ့အမြား ပြျောရှငျနကွေခြိနျမို့ “ငါ မိဘပဲ” ဆိုသညျ့ ဖိအားမြိုး မပေးသငျ့ပါ။သငျ့တျောရုံမြှသာ ဆိုဆုံးမသငျ့ပါကွောငျး ခုတော့ မိသားစုတစုလုံး ဖွမေဆညျနိုငျ ရငျကှဲစရာ အဖွဈမြိုး ကွုံကွရရှာလပွေီး …
သတငျးဓါတျပုံ – အရှငျတဇေ(နာယကဆရာတျော) – ရငျခုနျသံ ရှငျရေးကူညီမှုအသငျး – စြေးကြောငျးတိုကျ၊အုတျတှငျးမွို့ 
Previous: 2000 Vs 2010 ခုနှစ်တွေက ထိပ်တန်းမင်းသားတွေရဲ့ ရုပ်ရည်တွေကို ယှဉ်တွဲပြသ
Next: အင်းလျားကန်ဘောင်တွင် အလှဆင်ထားသော ပုသိမ်ထီးများအား ဖြုတ်ယူမှုဖြစ်ပွား